ကင်ဆာ ရောဂါ ပျောက်စေနိုင်သော ဒူရင်းသြဇာရွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကင်ဆာ ရောဂါ ပျောက်စေနိုင်သော ဒူရင်းသြဇာရွက်
ကင်ဆာ ရောဂါ ပျောက်စေနိုင်သော ဒူရင်းသြဇာရွက်
Posted by thar ag on Nov 1, 2012 in Copy/Paste | 27 comments
ကျမတို့ ရုံးနှစ်ပတ်လည် အစည်းဝေး အတွက် နိုင်ငံ အသီးသီးက တက်ရောက်လာတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ထဲမှာ တယောက် ကျမတွေ့တော့ တော်တော် အံ့အား သင့်သွားတယ်။ ဒီနှစ်စမှာဘဲ ဆေးစစ် တဲ့အခါ ကင်ဆာလို့ အဖြေထွက်ပြီး ကျမတို့ တတွေ စိတ် မကောင်း ဖြစ်နေ ခဲ့တာပါ။
အခုတစ်လော ကင်ဆာဆိုတာနဲ့ လူတွေက လန့်နေကြပါပီ။ ခီမိုသွင်းရတာနဲ့ မိသားစုဝင်တွေ စိတ်ပင်ပန်း ကြတာနဲ့ ရုတ်တရက် သေဆုံး သွားတာနဲ့ ဒါကြောင့် ကျမတို့ ရုံးက အန်တီ ဆိုရင် သူ့ကင်ဆာဖြစ်တာ သူများကို မသိ စေချင်ဘူး၊ သူများတွေ သူ့ကို သေလူလို့ ကြည့်နေတဲ့ အကြည့်တွေ မခံနိုင်ဘူး ဆိုပီးရင် ဖွင့်ရှာပါတယ်။
ကျမ ရဲ့ အချစ်ဆုံး ကြီးကြီးလဲ ကင်ဆာနဲ့ ဆုံးသွားသလို အမလို ခင်မင်ပြီး ချစ်ရတဲ့ ရှေ့နေမမ တစ်ယောက်လဲ ကင်ဆာနဲ့ ဘ၀ဆုံးသွား ရရှာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျမတို့ မိသားစုနဲ့ နှစ်အိမ်တစ်အိမ် လိုဖြစ်နေတဲ့ မိုးကောင်းက အန်တီနဲ့အန်ကယ်လဲ ကင်ဆာနဲ့ဘဲ ဆုံးပါး သွားကြတယ်။
အရင်ကတော့ ပန်းခါး ဆိုတာ အရမ်းကို နာမည်ကြီးတယ်။ ပန်းပင် အခြောက်လေး တွေကို ရေနွေးကြမ်း လိုလုပ်သောက် ရတာပါ၊ အရမ်းကို ခါးတော့ ကျမတောင် စမ်းသောက်ကြည့်ပီး တွန့်သွားတာနဲ့ မသောက် ဖြစ်တော့ပါဘူး။ ခီမို သွင်းထားတဲ့ လူနာတွေဆို ခံတွင်းထဲ ဘာထည့်ထည့် အရသာ မရှိတော့ဘူး။ အရမ်းလဲ သနားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ဆေးပညာ အကြောင်းအစုံလင် နားမလည် ပေမယ့် ခီမိုသွင်းတာ ကင်ဆာ cell အကောင်းရော အဆိုးပါ သတ်ပစ် တာဖြစ်ပီး ဒီဒူးရင်း သြဇာ အရွက်ပြုတ်ရည်ရဲ့ အာနိသင်ကတော့ ကင်ဆာ ဆဲလ် ချည်းသတ်သတ် ကိုသာ သတ်ပစ် တယ်လို့ ရှင်းပြ ပါတယ်။
ကျမ ညီမလေး ကျောင်းက ပရော်ဖက်ဆာကတော့ လူတိုင်းတော့ ပျောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကင်ဆာဖြစ်ပုံ အမျိုးစားခြင်း မတူသလို ခန္တာကိုယ်က တုံ့ပြန်ပုံခြင်းလဲ မတူနိုင်ပါ ဘူးလို့ ဆိုပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမ အကြံ ပေးခြင် တာကတော့ အနည်းနဲ့ အများ ပျောက်သွား သည်ဖြစ်စေ သက်သာ သွားသည်ဖြစ်စေ အန္တရယ် မရှိတာမို့ စမ်းသောက် ကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်း ပါရစေ။ ကိုယ်နဲ့သိတဲ့ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း ဆွေမျိုး သားခြင်း များမှာလဲ ကင်ဆာ ရောဂါရှိတဲ့ သူများရှိရင် ထပ်ဆင့် ဝေငှ ပေးကြပါ။
အေးချမ်းမွန်မှ မြ၀တီသတင်းတွင်ဖော်ပြသော သတင်းကို မူရင်းအတိုင်းမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဒူးရင်း သြဇာ အရွက်ပြုတ်ရည်က အဲလောက်တောင်စွမ်းတာလား..။
ဒူးရင်း သြဇာ အရွက်က မြစ်ပွားနာကို နိုင်နင်းစေတယ်လို့တော့ တိုင်းရင်းဆေး ပြပွဲတစ်ခုမှာ ကြားဖူးတယ်၊ မြစ်ပွားနာဆိုတာက ကင်ဆာကိုဆိုတာပါ၊ ဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတာကို အဲဒီတုန်းက မစပ်စုမိခဲ့ဘူးဗျ၊ အခုလို သိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ဖတ်စေချင်လို့ မျှဝေပေးတာပါ ဖတ်ပေးေ၇းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူး တင်ပါတယ်
မိတ်ဆွေတယောက် ကင်ဆာနဲ့ stage4တော်တော် အခြေအနေမကောင်းဘူး
လေးလေးပါရေ … မထူးတဲ့အခြေအနေမှာ စမ်းချင်လဲစမ်းသင့်တယ်ထင်တာပဲဆိုတဲ့ အတိုင်း လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ် … သူတကယ် သက်သာတယ် ဆိုရင်တော့ ရွာထဲမှာ သံချောင်းလေးခေါက်ပြီး ထောက်ခံပေးပါဦး …….
တုံးတယ်လို့ပဲ ပြောပြော၊ ‘အ’တယ်လို့ပဲ ပြောပြော၊ ဒူးရင်းသြဇာရွက် ဆိုတာကို မသိလို့ မမြင်ဖူးလို့ပါခင်ဗျာ…..နီးစပ်ရာလေးများ ကျေးဇူးပြုပြီး ဒါ့ပုံလေး တင်ပေးစေချင်ပါတယ်..။
အသီးကတော့ အောင်ပန်းမှာတွေ့လို့ ၀ယ်ခဲ့သေးတယ်။
လပြည့်နေ့ကပဲ အသိတစ်ယောက် အူကင်ဆာနဲ့ ဆုံးသွားတယ် …… အခုလေးတင် နောက်ထပ်အသိတစ်ယောက် ကင်ဆာနဲ့အိပ်ယာထဲလဲနေတယ်တဲ့ စိတ်ထဲကင်ဆာဆိုတာ ကြီးကို ကြောက်လာတယ် … ဘယ်လိုမှ ပျောက်အောင်လုပ်တဲ့ဆေး … ကာကွယ်နိုင်တဲ့ဆေးမရှိဘူးလား ဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတုန်း စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ရွာထဲဝင်တော့ ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီး အားတက်သွားမိတယ် … ကျေးဇူးပါ ….Thar ag နံမည်ကို မြန်မာလိုမခေါ်တတ်ဘူး …
အရေးကြုံ ရင် သက်လုံကောင်းစေဖို့ပါ……
ဒူးရင်းဩဇာ ပုံကို ဒီလင့်မှာကြည့်လို့ရပါတယ်။
မခိုင်ရေ… အဲဒါမှ ဒုက္ခ… ခုမှပဲ ဒီအသီးကို မြင်ဖူးတယ်…မြန်မာပြည် ဘယ်လိုဒေသမှာ ဒီအပင် ပေါပါသလဲခင်ဗျာ… လုပ်ကြပါအုံး…
ရန်ကုန်ပုသိမ်သွားရင် မဲဇလီနားက သစ်သီးရောင်းတဲ့ ဆိုင်တန်းမှာ ဒူးရင်းသြဇာသီးတွေ ရတတ်လို့ အရွက်လိုချင်ရင် အဲဒီမှာ ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ ရန်ကုန်မှာဆိုရင် စကော့ဈေးရှေ့က စူပါဝမ်းနားမှာ ဆေးရွက်ဆေးမြစ်တွေ ရောင်းတဲ့ဆီမှာ မေးကြည့်ရင်လည်း ရနိုင်မယ်ထင်တယ်။
အဲဒါတော့မသိဘူးဗျ။ သိရိလင်္ကာမှာတော့ ပေါတယ်ဆိုပဲ။ မြန်မာပြည်ဘယ်မှာ ပေါတယ်ဆိုတာတော့ မပြောတတ်ဘူး။
ကျနော်လည်း စလုံး ရောက်မှ မြင်ဘူးတာ။
ဟိုတစ်ခေါက်ကလဲ အသည်းအတွက် သခွပ် ပင် အကြောင်းကိုတစ်ယောက်တင်ဖူးတယ်။
သဘာဝ ပေါက်ပင်တွေနဲ့ ရောဂါပျောက်တယ်ဆိုတော့ ပိုက်ဆံကုန် တာလဲ သက်သာတာပေါ့။
အခုလိုမျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အဆင်ပြေမယ်ဆို
ဓါတ်ပုံလေးပါတင်ပေးစေချင်ပါတယ် ဒါမှာရှာလို့လွယ်မှလေ ………
ဆေးနည်းလေးကို ဗဟုသုတဖြန့်ဝေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ ။ မမြင်ဖူးတဲ့ ဒူးရင်းသြစာပုံလည်းမြင်ဖူးသွားပြီ ။
ကြားတော့ကြားဖူးပေမယ့် … အမျိုးတွေထဲ လက်တွေ့ သုံးသူမရှိသေးလို့ …. အဟုတ်ပျောက်သလားတော့ မပြောတတ်ပါဘူး ။
ဒါပေမယ့်လေ ကင်ဆာဆိုတာက အဆင့်တွေ အများကြီးရှိပါတယ် ။ စစဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာတော့ …ဒီဆေးရွက်ကျိုသောက်ရုံနဲ့ ရကောင်းရလိမ့်မယ် (မရလျှင်လည်းမရဘူး -သေချာမသိပါဘူး) ။ ဆဲလ်က အမြစ်တွယ်သွားပြီလျှင်တော့ ၊ ဆေးကျိုသောက်လို့ ထိရောက်မယ်မထင်မိဘူး ။ ဒါကြောင့်လည်း အဆင့်တွေ အလိုက် ဆေးသွင်းပြီး ၊ ဒြပ်ကင်တာတို့ ၊ ခွဲထုတ်တာတို့ လုပ်ကြတာပါ ။
ကင်ဆာ ဆိုတာမျိုးကလည်း အဖုအကျိတ်လောက် စဖြစ်တာနဲ့ လူက ၊ သတိထားမိတာမျိုးမဟုတ်တော့ … အတော်များများက ကင်ဆာဖြစ်ပြီလို့ စသိချိန်က .. အဆင့် နှစ်လောက်ကို ကူးနေကြပြီ ။
ကာကွယ်ခြင်းက ၊ ကုသခြင်းထက် ပိုထိရောက်တာမို့ ၊ နေ့စဉ်စားနေတဲ့ အသီးရွက်တွေထဲက ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှု့ လျော့ချပေးတဲ့ အသီးရွက်တွေ လည်း မျှတအောင်စားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ် ။
အသီးရော အပင် ရော သေသေချာ ချာ ကို သိတယ်။
အသီး ကို အလုပ်က ပြန်အလာ အမောပြေ၊ အဆာပြေ စားခဲ့ တာ တွေ တောင် ပြန်မြင်မိသေး တယ်။
ခုလို ဆေးနည်း ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တစ်ကြိမ်ကို ဘယ်လောက် ml လောက် သောက်ရမလဲ သိချင်ပါတယ်။
သွေးစစ်တော့ AFP မြင့်နေလို့ စမ်းသောက်ကြည့်ချင်လို့။
ဒူးရင်းသြဇာက မှည့်လို့ပျော့သွားမှ အခွံခွာပြီးသကြားနဲ့နယ်စားရတယ်။ မွှေးပြီးချိုတယ်။ သူ့ချည်းပဲစားရင် နဲနဲချဉ်တင်တင် အရသာကလွဲပြီး ဘာအရသာမှမရှိဘူး။ ပုံမှာပြထားတဲ့ဒူးရင်းသြဇာတွေက စိမ်းသေးတယ်။ ဒူးရင်းသြဇာကို soursop လို့ခေါ်တာတော့ အခုမှသိရတယ်။
တစ်နေ့ ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဘယ်လောက်သောက်ရမယ်..ပြုတ်တာက ဘယ်လိုအနေအထားဘာအိုးကိုသုံးရမလဲ (မြေ.ကြွေ.သထ္ထု့..ကြေး..ဘယ်ခွက်နဲ့ ၃ ခွက်ကျိုပြီး ဘယ်ခွက်နဲ့ ၁ ခွက်တင်ရတာလဲ..ပြုတ်ရမယ့်အရွက်က အနု့..အရင့်.အချိန်အဆက ဘယ်လောက်) စသဖြင့်အသေးစိတ်လေးဖော်ပြပေးပါ.မြန်မာဆေးနည်းတွေရဲ့ ၃ ခွက် ၁ ခွက်တင်ဆိုတာက ခပ်ရှုပ်ရှုပ်ဗျ.ထက်မြတ်တဲ့ ဆေးစွမ်းကောင်းတွေ ကျနော်တို့ မြန်မာ့ဆေးနည်းတွေ အများကြီးရှိ့ပြီး ကမ္ဘာမကျော်တာထား..နားစေးချောင်းဆေးလေးကို ပိုက်ဆံအနည်းငယ်တတ်နှိုင်တဲ့သူတွေက မြန်မာ့ဆေးမြီးတိုကို မျက်နှာလွဲပြီး ဆေးခန်းကို ပြေးကြတာ..အဲ့ဒီ ၃ ခွက် ၁ ခွက်လေးက အခြေခံတယ်ထင်တယ်
အသီးတော့သီးနေပြီ အမှည့်ကိုတော့ အမေကတော့ သကြားနဲ့ ခေါက်ပြီးကျွေးလေ့ရှိလို့ စားဘူးတယ်….
Sharing with more detail fact like ” how to use ” can help the people who really need.
ရောဂါမရှိရင်ရော သောက်လို့ရပါတယ်နော် … အရင်တုန်းကပေါ်လိုက်သေးတယ်လေ AIDS ပျောက်တဲ့ ဘာဆိုလားပဲ … ဆီးချိုပျောက်တာ ရဲယိုဆိုလားပဲနော် …
ခုလို့သိခွင့်ရတဲ့အတွက် ..ကျေးဇူးပါ …
I don’t understand why i got “-” minus for my and other people’s positive comments.
Somebody explain me.
first last ရေ ။ အဲ့ဒီ အနီတွေ အစိမ်းတွေပေါ် ခံစား မနေပါနဲ့ ။။
ဒီလို ဘဲ သူများ စိတ် အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင် လိုက်နှောက်ယှက် တဲ့ သူတွေ ရှိပါတယ် ။
သက်သက် နှောက်ယှက်တာပါ ။။။ လစ်လျု ရှုထားလိုက်ပါ။
နဲ့ အပေါင်မြို့ နယ်အတွင်း။မော်လမြိုင်ဖက်မှာထွက်ရှိပါတယ်။အမျိုးသားရဲ့ ဖွားလေးဖြစ်သူဟာကင်ဆာရောဂါနဲ့ သေလွန်ခါနီးဆဲဆဲမှာသားဖြစ်သူဥူးပဉ္ဖင်းကကိုယ်တိုင်အပင်ပန်းခံပြီးဇင်းကျိုက်ကျေးရွာလယ်ကွင်းတွေထဲမှာဆေးဖက်ဝင်အစွမ်းထက်မြက်လှတဲ့မြင်းစခုံနီ(အနီ)အမြစ်တွေကိုကိုယ်တိုင်တူးဆွပြီးဆေးမြစ်တွေကိုဖော်ယူပြီးအခြောက်လှမ်းကာဆန်ဆေးရေနဲ့ သွေးပြီးတိုက်ခဲ့တာ(၃)နှစ်ကျော်မျှမှာမှကွယ်လွန်ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကင်ဆာရောဂါအထူးကုသမှုခံယူခဲ့ရာမှသေမယ့်ရက်ပိုင်းအလိုသားဖြစ်သူဥူးပဉ္ဖင်းကမွေးရပ်မြေကိုပြန်ပြီး
သဂြိုလ်မှုပြုချင်ပါကြောင်းခွင့်တောင်းခံခဲ့ပြီးမယ်တော်ကိုရွာပြန်သယ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်ကိုတိုင်နှလုံးပူလောင်စွာနဲ့ ဆေးကျမ်းတွေထဲမှာရှာဖွေဖတ်ရှူရင်းတွေ့ ရှိခဲ့လို့ ကုသကြည့်ခဲ့ရာမှနောက်ထပ်(၃)နှစ်ကျော်မျှအသက်ရှင်နေထိုင်သွားရတာကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ သိရှိခဲ့ရပါတယ်။။